काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक सल्लाहकार हुन्, विष्णु रिमाल । रिमालको अहिलेको परिचय र पहिचान यही हो । उनको परिभाषित काम हो, प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक राजनीतिक सल्लाह दिनु । अर्थात्, पार्टीभित्र होस् वा बाहिर, राजनीतिक रूपमा समन्वय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो राजनीतिक वातावरण बनाइदिने । सल्लाहकारको काम हो, ‘विपक्षी, विरोधी अथवा आलोचकहरूसँग समेत समन्वय गरेर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा सकारात्मक वातावरण बनाइदिने ।’
तर, रिमालले वातावरण बनाइदिनेभन्दा पनि पार्टीभित्र र बाहिर दुवैलाई सार्वजनिक रूपमा ‘तुच्छ’ भाषा प्रयोग गरेर वातावरण बिगारिरहेको भन्दै पार्टी भित्रै आलोचना हुने गरेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, २२ असार २०७६ मा गरेको ट्विट । रिमालले निम्न स्तरको भाषा प्रयोग गरेको भन्दै सबैले खेद जनाए । उनले लेखेका थिए–
आफैं चलमलाएका हुन् कि
कसैले छोडेका ?
को हुन् छौंडा ?
छौंडा अर्थात् बोक्सीका छोरा । बोक्सी हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई आधुनिक समाजले अस्वीकार गर्छ । तर, उनले यही मान्यताविरोधी शब्द लेखेपछि महिला अधिकारकर्मीहरूले समेत उनको तीव्र विरोध जनाए । रिमालले आइतबार एकाबिहानै यो यस्तो ट्विट गरेपछि दिनभरि सामाजिक सञ्जालमा बहस भयो, ‘रिमालले कसलाई भने छौंडा ?’ रिमालले एक अनलाइनलाई विशुद्ध मनका कुरा पोखेको बताए ।
रिमालले यस्तो आक्रोश पोख्नुको कारणबारे सामाजिक सञ्जाल र बाहिर दुई खालका चर्चा भए । पहिलो ‘तरकारी एवं फलफूलमा विषादी परीक्षण प्रकरण ।’ गत जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल भित्रिने तरकारी एवं फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यो निर्णयलाई असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्यायो । योसँगै भारतीय व्यापारीहरूले भारतीय दूतावासमा गुनासो लगेपछि भारतीय दूतावासले २९ जुनमा निर्देशनको शैलीमा लिखित पत्र पठाएर तरकारी र फलफूलको परीक्षणसम्बन्धी निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न भनेको थियो । भारतीय दूतावासको यो पत्रपछि गत बिहीबारको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकार पछि हट्यो ।
यसरी सरकार पछि हटेपछि सरकारको तीव्र विरोध भयो । अनेरास्ववियुका कार्यवाहक अध्यक्ष रञ्जित तामाङले विज्ञप्ति निकालेर नै सरकारको विरोध गरे । पूर्वमाओवादीनिकट मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री ओलीको तारो भए । यही प्रकरणलाई लिएर रिमालले प्रचण्डलाई ‘बोक्सी’ माओवादीमन्त्री, रञ्जित तामाङहरूलाई छौंडा भनेका हुन् भनेर धेरैले अनुमान गरेका छन् ।
दोस्रो एक अनलाइनमा ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रमका प्रस्तोता मनोज पाण्डेसँग रिमाललाई जोडेर समाचार आयो । रिमालका भान्जा पाण्डेले सिंहदरबारभित्र चन्दा आतंक मच्चाएको त्यो समाचारमा उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री र बालुवाटारको नाम दिँदै अहिले हरेक मन्त्रालयमा आतंक चन्दा आतंक मच्चाएको समाचारमा उल्लेख छ । भान्जा पाण्डेले ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ भन्ने कार्यक्रममा हरेक मन्त्रालयले काम गरेका भिडियो रिपोर्ट बनाएको र त्यो भिडियो रिपोर्टका निम्ति भन्दै हरेक मन्त्रालयमा २५ देखि ३० लाखसम्मको बिल पठाएको समाचारमा उल्लेख छ । हरेक मन्त्रालय, नेपाली सेना र विभिन्न विभागमा पनि ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ उत्पादन गर्ने एनजीओ ‘कथा नेपाल’को नाममा बिल पठाएको समाचार प्रकाशित छ ।
यसैगरी समाचारमा सल्लाहकार रिमालले सरकारको पक्षमा लेख्ने अनलाइन खोल्ने भन्दै चन्दा उठाएको पनि लेखिएको छ । रिमालले नेकपा र सरकारको आधिकारिक अनलाइन खोल्ने भन्दै व्यपारीहरूबाट पैसा उठाइरहेको समाचार लेखिएको छ । रिमालले अहिले करिब १५ करोड उठाइसकेको दाबी छ । यही समाचार प्रकाशित भएपछि उनी आक्रोशित भएपछि पार्टीभित्रकै कुनै नेताले आफूविरुद्ध समाचार लेखाएको अनुमान गरेर आक्रोश पोखेको हुन सक्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।
प्रहार सधैं आफ्नै नेताविरुद्ध
गत असोजमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको काम सुस्त र पार्टी एकतामा ढिलाइ भएपछि आलोचना गरे । सल्लाहकार रिमालले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि मत्थर पार्न सल्लाहकारको हिसाबले समन्वय गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले आफ्नै वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललको पतन सुरु भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे । उनले गत १३ असोज २०७५ मा वरिष्ठ नेता नेपालविरुद्ध लेखेका थिए,
मानिसको पतन त्यस समय सुरु हुन्छ,
जब आफ्नैलाई ढाल्न
पराईसँग सल्लाह लिन सुरु
सिके राउतसँग सरकारले सम्झौता गरेपछि नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावललगायत नेताहरूले रावतसँगको सम्झौताको विषयमा प्रश्न उठाए । देश विखण्डनको नारा बोकेर हिँडेका राउतको आगामी कदमबारे आशंका गरे । सल्लाहकारको हिसाबले रिमालले शंका निवारणका लागि बुझाउनुपर्ने थियो । तर, उनले भीम रावललगायत नेताहरूविरुद्ध कवितात्मक शैलीमा टिवट्रमा लेखे,
झुक्किए, फसे वा फसाइए
या तिनीहरूले गल्ती नै गरे पनि
कोइबात छैन, हामी धन्य छौं
मुलुक जोगाउने एक से एक उहाँहरू हुनुहुन्छ
आङ सिरिङ हुन्छ
र, साह्रै आश्चर्य लागि रहेको छ,
यो मुलुक कसरी जोगिएछ ?
तत्कालीन नेकपा (एमाले) सचिव योगेश भट्टराईले केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेल्सन मन्डेला बन्नुपर्ने धारणा दिए । यही विषयमा रिमालले जनवरी १ मा भट्टराईविरुद्ध लेखे, ‘उबेला ओलाङचुंगोलादेखि जोगबुढासम्म तिनै बुढा ओलीले सम्बोधन नगरे खेल जित्छु भन्ने आँट हाम्रा खेलाडीहरूमा थिएन । अहिले यसो सुन्छु र दंग पर्छु, तिनै ओलीको ‘बक–अपुबाट ट्रफी पाउने साथीहरूको ‘माक–फुइँ’ले के विधि सगरमाथा चढेको हो ?’
सल्लाहकार रिमालका यी केही ट्विट उदाहरण मात्रै हो । अधिकांश ट्विट र सामाजिक सञ्जालमा रिमालले पार्टीका नेतृत्व गरिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टीका नेताहरूविरुद्ध विषवमन गर्ने गरेका छन् । प्रधामन्त्री ओली र नेताहरूबीचको सम्बन्धमा पुल बन्नुपर्नेमा रिमाल करौती बन्ने गरेको नेताहरूको गुनासो छ । विपक्षी दलका नेताहरूसँग समेत समन्वय गर्ने, विषय बुझाउने जिम्मेवारीमा रहेका रिमालले आफ्नै नेताविरुद्ध निरन्तर लेख्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत अप्ठ्यारो भएको छ । रिमालको ट्विट प्रधानमन्त्री कार्यालय र बालुवाटारको विचारका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा सरकारप्रतिको घृणा पैदा गराउने काम गरेको नेकपाकै नेताहरू बताउँछन् ।
सामाजिक सञ्जालमा फेरि ‘रिमाल राज्य’
रिमाललाई अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको छाया ‘शासक’ रूपमा व्याख्या गरिन्छ । सरकार र पार्टीमा दबदबा राखेर बसेका रिमाल पार्टीका कुनै त्यस्तो नेता भने होइनन् । प्राविधिक ज्ञान भएका रिमालले अहिलेसम्म पार्टीभित्रको कुनै निर्वाचन र अन्य निर्वाचन जितेका छैनन् । तर, पनि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट भएर उनी निरन्तर सत्ताको केन्द्रमा छन् ।
सरकारकलाई सबै हिसाबले बलियो बनाउनेभन्दा पनि आर्जन गर्ने अभियानमा रिमाल लागेको नेताहरूको दाबी छ । रिमालले सामान्य कार्यक्रमदेखि ठूल्ठूला टेन्डरहरूमा समेत चासो राख्ने गरेको बताइन्छ । ठूला आयोजना र कार्यक्रमहरूमा चासो रहने त भयो नै, उनले विज्ञापन बजारमा समेत आफ्नो ‘भाग’ खोज्ने गरेका छन् । रिमालले ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’का सञ्चालक भान्जा पाण्डेमार्फत सञ्चार र विज्ञापन बजारमा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार भान्जाको एनजीओ ‘कथा नेपाल’को उनी साझेदार हुन् ।
पछिल्लो समयमा सरकारले डिजिटल क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरेको छ । डिजिटल क्षेत्रमा भने रिमालको कब्जाजस्तै रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञका रूपमा उनले नियुक्ति दिलाएका विज्ञ अस्गर अलीले यो मोर्चा सम्मालेका छन् । अहिले अर्बौं कारोबार गरिरहेको ईसेवाका सीईओ अलीले सूचना प्रबिधि क्षेत्रका सबै सरकारी व्यापार हेर्छन् । रिमालको लगानी र अली सीईओ भएको ‘ईसेवा’ निजी कम्पनी हो । तर, विद्युत्, खानेपानीलगायत सरकारी कार्यालयहरूमा डेस्क बनाएर बसेको छ । सरकारी बिल सबै ‘इसेवा’ मार्फत तिराउने अभियान नै चलाएका छन् । ‘ईसेवा’का सेकेन्ड म्यान रिमालकै छोरा क्षितिज रिमाल छन् ।
मन्त्रीहरूलाई ल्यापटप किन्ने होस् या मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले लाइभ संवाद गर्ने प्रविधिको काम । यी सबै रिमालले अलीमार्फत गराएको बताइन्छ । चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनुमतिपत्र जिम्मा पनि अलि संग्लन भएको मालिका इन्कर्पोरेटलाई कम्पनीलाई दिइएको छ । त्यसो त राहदानी विभागसँग भएका पासपोर्टका सबै डाटा, वैदेशिक रोजगार विभागसँग भएका डाटा, यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गतको ड्राइभिङ लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रसँग रहेका सम्पूर्ण डाटा, अध्यागमनलगायत अन्य सार्वजनिक निकायसँग सुरक्षित रहेका मानिसका गोप्य विवरण संकलन गरेको भन्दै अलीको आलोचनासमेत भएको थियो ।
छपाइ र होर्डिङ बोर्डमा समेत ‘कमिसन’
सल्लाहकार रिमालको अर्को विज्ञता हो, ‘मञ्च र सडकहरूमा राखिने होर्डिङ बोर्डहरूको डिजाइन ।’ तर यो उनी आफैं गर्दैनन् प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रविधि विज्ञकै रूपमा जागिर खाइरहेका महेन्द्र श्रेष्ठ र किरण मालीले यो काम हेर्छन् । महेन्द्र श्रेष्ठ पुतलीसडकमा रहेको ‘एमएस माउस’ कम्पनीका मालिक हुन् । छपाइ र डिजाइनिङसम्बन्धी काम गर्ने श्रेष्ठ रिमालका व्यापारिक साझेदार हुन् । सरकारी प्रकाशन र होर्डिङ बोर्ड उनीमार्फत गर्ने गरेका स्रोतको भनाइ छ । उनीहरूले आफैं बसेर प्रकाशनका योजना र बजेट तयार पार्ने गरेका छन् । जस्तै एक वर्षअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रकाशन गरेको पुस्तक ‘प्रधानमन्त्रीको पाँच महिना’ । महँगो कागजमा प्रकाशन गरिएको यो पुस्तक अहिले पार्टी कार्यालयको गोदाममा थन्किएर बसेको छ । सामान्य सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दा हुने विषय करोडौं खर्च गरेर छापिएको थियो ।
यतिसम्मकी सरकारी होर्डिङ बोर्डहरूमा समेत नाफाघाटाको हिसाब हुने गरेको बताइन्छ । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को शिखर सम्मेलनमा सहरमा राखिएका होर्डिङ बोर्डमा समेत करोडौं कमिसन खाएको स्रोतको दाबी छ । विभिन्न समयमा सहरमा राखिने सरकारी प्रचारका होर्डिङ बोर्डहरूमा सबै जिम्मा श्रेष्ठमार्फत लिएर बजेट परिचालन गर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रीदेखि खरदारसम्मको काममा हस्तक्षेप
त्यसो रिमालले मन्त्रीहरूदेखि खरदारसम्मको काममा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन् । रिमालले ‘मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिरहेको र उनीहरूको ग्रेडिङ’ पनि सार्वजनिक गरेका थिए । संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन शाखा (कप्र) ले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी काम गर्छ ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा यसैको जिम्मेवारी हो । तर, यो शाखामा पनि रिमालले आफ्ना निकट कर्मचारीहरू लगेर सेटिङ मिलाएर उसैले यो काम गर्ने गरेका छन् ।